Loza—Raha Marary Tampoka Ianao
Raha Marary Tampoka Ianao
Vehivavy navitribitrika i Mabel, any Arzantina. Nikarakara olona avy narary mafy no asany. Nampiany izy ireny mba ho afaka handeha tsara indray. Tamin’ny 2007 anefa, dia lasa reraka be foana izy sady narary be ny lohany isan’andro. Hoy izy: “Dokotera maro no efa nalehako, ary nohaniko daholo izao karazam-panafody rehetra izao saingy tsy nisy vokany!” Farany dia notarafina ny vatany manontolo, ka hita fa misy kansera ny atidohany. Hoy i Mabel: “Hoatran’ny nilatsaham-baratra aho tamin’izay. Saika tsy nino aho hoe izaho ve dia voan’izany!”
“Rehefa avy nodidiana aho vao tsapako fa tena ratsy be ny aretiko. Tsy afa-nihetsika aho, ary tsy afaka nihodina akory aza ny lohako. Mba natanjaka tsara sy navitribitrika erỳ aho, nefa dia nalemy tampoka teo! Nikorontana be ny saiko tao amin’ny hopitaly. Tsisy zavatra henoko afa-tsy ny feon’ireo fitaovan’ny hopitaly, sy ny marary mikonainaina. Efa mafy ny nahazo ahy, moa ny fahorian’ireo marary hafa mbola nanampy trotraka.”
“Efa mba tsaratsara aho izao, satria mahay mamindra irery ka afaka mandehandeha indraindray. Mbola mandroroa anefa ny masoko, ary tsy miasa tsara ny hozatra sasany amin’ny vatako.”
Miezaha hieritreritra zavatra mampahery. Hoy ny Ohabolana 17:22: “Ny fo falifaly dia sady mahasoa no manasitrana, fa ny fahakiviana kosa mahamaina taolana.” Hoy i Mabel: “Tena tsapako ny zavatra nanjo an’ireo olona nokarakaraiko taloha. Nampianarina nandeha indray aho, ary mafy be ilay izy ka imbetsaka aho no saika tsy hanao intsony. Fantatro anefa fa mahasoa ilay izy, ka niezaka foana aho hitadidy hoe raha miaritra aho dia ho sitrana ihany.”
Manàna fanantenana dia hahavita hiaritra ianao. Hoy i Mabel: “Nianatra Baiboly aho ka fantatro hoe nahoana no misy loza mitranga. Haiko koa anefa fa tsy ho ela intsony dia ho foana ny fijaliana, ary mihamanakaiky isan’andro izany fotoana izany.” *
Tadidio fa hitan’Andriamanitra ny mahazo anao ary miahy anao izy. (1 Petera 5:7) Tena tsapan’i Mabel fa marina izany. Hoy izy: “Tamin’izaho hodidiana, dia nanome toky ahy ilay tenin’i Jehovah ao amin’ny Isaia 41:10 hoe: ‘Aza matahotra fa momba anao aho.’ Tony be aho nieritreritra hoe fantatr’i Jehovah izay manjo ahy.”
Fantatrao ve? Mampanantena ny Baiboly fa mbola ho foana ny aretina, ka tsy hisy olona harary intsony.—Isaia 33:24; 35:5, 6.
^ feh. 8 Raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia jereo ny toko 11 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?
Hizara Hizara Raha Marary Tampoka Ianao
Raha Misy Loza Tampoka ka Marary Mafy Ianao